Andriamby Latching fampitàna
High Power notantarain'ilay
State mafy notantarain'ilay
Time ny fifandimbiasana
Faladia for notantarain'ilay
KWH herinaratra Meter Components
varahina ny terminal
NCR dia naorina teo an 2003, toy ny anankiray amin'ny nitarika fifandimbiasana mpanamboatra ao Shina amin'ny mpiasa 600 mahery. Malala-tanana isika noho ny vola ny tena mandroso fitaovana famokarana sy ny teknolojia maneran-tany. Output fanao isan-taona dia mihoatra ny 100 tapitrisa farantsa.
Product isan-karazany ahitana ny herinaratra handefasana, Latching fampitàna, fampitàna Socket, ventin-panjakana handefasana, Power Semiconductor Module sy Bridge Rectifier sns
Under ISO9001: 2000, ISO14001: 2004 & OHSASA18001 Quality System, efa nahazo CCC, CQC, taona, Ul & TUV fankatoavana ary koa RoHS mifanaraka tsara fanamarinana. Araka ny azo antoka tsara, ary koa ny asa fanompoana tena tsara mpanjifa, dia nivarotra ny vokatra tsara manerana ny tanibe Shina sy maneran-tany.
Mba hanatratrarana ny fampandrosoana maharitra ao amin'ny eran-tsena, dia mikiry ny fitantanana saina "Tsy Nivadika & Ny fahamboniana" ho zavatra mba hanefa azo antoka ny vokatra, ambony rehefa avy-fanompoana fivarotana sy Ara-potoana fanaterana hihaona ny filàna rehetra maneran-tany mpanjifa.